Hydroponika, fambolena tany - Hidroponia Asociación Hidroponica Mexicana
Hydroponika, fambolena tany
Hatramin'ny nahitana voalohany fa ny zavamaniry dia miditra amin'ny rano ao anaty rano, ny teknika rehetra ifanarahana amin'ity fepetra ity dia tafiditra ao amin'ny famaritana ny hydroponika, (aeroponika, rafitra fambolena vaovao, fakany mitsingevana, ny fambolena ara-paritra, sns. ). Azo antoka fa mora voageja io premise io, satria, ara-boajanahary, dia toy izany koa ny fomba mamelona ny zavamaniry ao anaty fomban-drazana eo an-tanety na eo an-tsaha voajanahary, na izany aza, ny tsy fitovian-kevitra fototra dia ny fifehezana ny fambolena zavamaniry, omena fa amin'ny fambolena rehetra miankina amin'ny tany, ny fifehezana ara-tsakafo dia saika tsy azo tanterahina.
Noho izany, iray amin'ireo fototry ny hydroponika fototra dia ny fahaizana mifehy, ary araka ny fikarohana dia tsy ny fanaraha-mason'ny otrikaretina ihany no zava-maniry, fa ny fifehezana ireo variants hafa ihany koa toy ny hazavana, average, CO2 level , ny hamandoana akaiky, dia azo atao aza ny manadihady ny vokatry ny mari-pana amin'ny foton'ny zavamaniry, ny olana tsy dia fahita amin'ny fomba fambolena hafa.
Ny hydroponika dia fomba iray hamboly zavamaniry misy vahaolana mineraly fa tsy tany fambolena. Saingy raha ny tena izy dia mihoatra lavitra noho izany, safidy azo ampifanarahana amin'ny sehatra rehetra izy io, na fampiasam-bola, azo atao ao an-trano na amin'ny sehatra lehibe, dia fomba iray mavitrika hamokatra ao anaty legioma kely tsy misy loto, izay manome lanja ny otrikaina avo lenta. Ho fanampin'ny lafiny ara-toekarena ary fomba iray ihany koa ny famokarana vokatra voajanahary sy mahavita tena.
Manasa anao izahay handinika ny tranokalanay.
Fanamarihana: ireto horonantsary ireto dia azo jerena ao amin'ny www.hidroponia.org.mx dikan-teny espaniola.